September 2012 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
by ရင် နင့် အောင် on Sunday, September 30, 2012 at 9:49pm
မေမေဟာ ဖြူစင်မှုရဲ့ အရှင်သခင်
by စာကြည့်တိုက်(ရွှေအိမ်စည်စာပေဒါနပြုပါသည်) on Sunday, September 30, 2012 at 9:08pm ·
[ပြင်ဆင်ရန်] (၁) ကယားလူမျိုးစုများ
[ပြင်ဆင်ရန်] (၂) ကယန်းလူမျိုးစုများ
by Moenge Aung on Sunday, September 30, 2012 at 9:08pm
မောင်လှဝင်းသည် တောင်ငူမြို့၏ မြောက်ဘက် ဆင်ခြေဖုံးရက်ကွက်လေးတွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်သည်။ အဖေ အမေ အပါအ၀င် မောင်နှမ ငါးယောက်နှင့် မိသားစု ခုနစ်ယောက်ရှိသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူက အငှားဆိုက်ကားနင်းသည်။ မိသားစု ခုနစ်ယောက်ရှိ၍ သူတို့ဝင်ငွေနှင့် မလောက်ငပါ။
by Ven Ravika on Saturday, September 29, 2012 at 8:13pm
လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တပ် မငြိုငြင်ဖို့၊ သိန်းစိန်အစိုးရ အမြင်ကြည်ဖို့၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ယုံကြည်ဖို့ အချိန်အဆမှန်မှန်နဲ့ ကြိုးတန်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ အတိမ်းအစောင်းခံလို့ မဖြစ်ပါ။
ဘွင်ဘွင်ပြောရယင် တပ်က အခုထိ ဣနြေ္ဒရရ ရှိနေပါတယ်။ တပ်က ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေး၊ နယ်စပ်ကို ကိုင်ထားပြီး လွှတ်တော်မှာလည်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေလို့ ဘယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုမဆို တပ်က သဘောတူမှပဲ လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ စာရေးသူတို့ ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ သူမစဉ်းစားအားပါ။ ၂၀၁၅ ခုမတိုင်မီ တပ်ကို စည်းရုံးနိုင်ဖို့ သူ့အတွက်ရော တိုင်းပြည်အတွက်ပါ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ်။
by ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) on Sunday, September 30, 2012 at 7:25pm ·
စကားကို တိုပြတ်ပြတ်ပြောတတ်သော၊ မေးတစ်ခွန်းဖြေတစ်ခွန်း မဖော်ရွေလှသော၊ အမေးအမြန်း ထူလာလျှင် ၀ယ်မှာမို့လားဆိုသည့် မျက်နှာပေးနှင့် မဖြေချင့်ဖြေချင် အကြောမာလှသော... သည်မိန်းကလေးမျိုးကို အရောင်းစာရေးခန့်ထားသည့် ဆိုင်ရှင်ကိုလည်း အံ့သြလှ၏။
အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် မြန်အောင် လုပ်နည်း
အင်တာနက်ကော်နက်ရှင် မြန်အောင်လုပ်တယ်ရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်ခုတည်းကနေ ကော်နက်ရှင် သာမန်သုံးနေ ကျထက် အနည်းငယ်ပိုမြန်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။ နဂို ရတဲ့ အင်တာနက် Speed နဲ့ ပမာဏ က နည်းနေရင်တော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မြန်အောင် လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုရှိပါတယ်။
Author: lubo601 | 4:27 PM | No မှတ်ချက် |
by Myanmar Online News on Sunday, September 30, 2012 at 6:04am ·
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို အာစီယံနိုင်ငံများ၏ စံချိန်၊ စံနှုန်းများနှင့်ညီအောင် ၂၀၁၅ နှစ်အမှီ ပြုပြင်ပြောင်း လဲနိုင်ဖို့ တက်စုံရွက်စုံဖွင့်ပြီး နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်းများ အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ … ပြုပြင်ပြောင်းလွဲရေးမှာ ကဏ္ဍများစွာရှိနေလေတော့ ဘယ်ကဏ္ဍများကို အရေး တကြီး အရင်ပြုပြင်ပြောင်း လဲသင့်သလဲဆိုတဲ့ အမေးပါ။
Author: lubo601 | 4:25 PM | No မှတ်ချက် |
by မင်းလူ၏ ၀တ္တုတိုများ on Sunday, September 30, 2012 at 10:54am ·
နှစ်ထပ်တိုက် အဆောက်အအုံကလေးမှာ အမျိုးသမီးပြင်ပလူနာဌာနဖြစ်သည်။
မနက်အစောကြီးကတည်းကပင် လူနာတွေအများကြီးရောက်ရှိနေပြီး သံတံခါးဖွင့်မည့်အချိန်ကို စောင့်နေကြသည်။
ပုဇွန်တောင် လူသတ်မှု ဖြစ်ရပ်မှန် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုက ဖွင့်ချလိုက်ပြီ
by General Knowledge on Sunday, September 30, 2012 at 1:06pm ·
သစ်ထူးလွင် 9/13/2012 02:18:00 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက် နေ့က ရန်ကုန်မြို့ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ရေကျော် (၇) ရက်ကွက်၊ အမှတ် (၇) ၊ ၅ လွှာ မှာ နေထိုင်တဲ့ ဒေါ်မေနှင်းဆီပာန် (ခေါ်) ဒေါ် Betty ပာန် အား လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့သော လူသတ်မှု ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှ Myanmar News Now သို့ပေးပို့ထားပါသည်။
Author: lubo601 | 12:27 PM | No မှတ်ချက် |
by Moenge Aung on Saturday, September 29, 2012 at 9:01pm
တကယ်တော့ “စုတူသတ်စနစ်”ဆိုတာ ကိုကြီး ပေးထားတဲ့ နာမည်ပါ။ နာမည်ကိုသာ ပေးတာနော်။ ဒီစနစ်ကတော့ မြန်မာစကား၊ မြန်မာစာမှာ နဂိုကတည်းက ရှိပြီးသားစနစ်ပါ။ စနစ်နာမည် တပ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စနစ်နာမည် မတ်ဘဲပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီစနစ်ကို သုံးနေကြပါတယ်။ ဒီစနစ်ကလည်း မြန်မာစကား မြန်မာစာမှာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ မှန်ကန်ဖို့နဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်သိဖို့ အလွန်ကောင်းတဲ့စနစ် ဖြစ်နေတာကိုး၊ ဆရာတော် ဦးကောသလ္လကတော့ “ဗြဟ္မနိရုတ္တိနယသင်္ဂဟ ခေါ် မြန်မာစာလုံးပေါင်း ပြောင်းထုံးကျမ်း(၁၉၈၅)မှာ အက္ခရာ ဖိုမ ပြောင်းလဲခြင်း”လို့ ခေါ်ထားလေရဲ့။
ဒေါ်စု မိန့်ခွန်း ( အမေရိကန်နိုင်ငံ Yale တက္ကသိုလ်မှ --- နိဂုံး )
by Spring Flowers on Friday, September 28, 2012 at 11:05pm ·
အဲဒီအပြောင်းအလဲကောင်းကို ရအောင်ဖန်တီးရာမှာ ကျမတို့မှာ အဘက်ဘက်က အကူအညီလိုပါတယ် ။ ဒီတော့ အခုလို စကားပြောခွင့်ရတာလေးကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ပြောပါရစေ......... မြန်မာပြည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ရာမှာ ကျမတို့ကို လူကြီးမင်းတို့က ကူညီပေးကြပါ။ ကျမတို့မှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ တရားသူကြီးတွေလိုပါတယ် ။
သို့ ..... ညီမလေး
တစ်လောက အင်တာနက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ အနည်းငယ် ပြောလိုပါတယ် ။ မြန်မာဆိုတာ ခေတ်အဆက်ဆက်က အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့သူတွေပါ ။ အမျိုးထိရင် မချိအောင်နာတတ်တာ မြန်မာလူမျိုးပါ ။
Author: lubo601 | 9:07 AM | 1 Comment |
မိဘတွေက ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကို သူတို့ငယ်စဉ် အမှားအမှန် ပိုင်းခြား ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အသိဥာဏ် မရှိသေးခင်မှာ ကိုယ်လက်ခံ ကိုးကွယ်ထားတဲ့ ကိုယ်နှစ်သက်ယုံကြည်ထားတဲ့ ဝါဒ ၊ ဘာသာတရား အတွေး အခေါ်တွေကို မျိုးစေ့ချပေးထားသင့်သလား။ အဲဒါကို Brainwash လုပ်ထားတယ်လို့ ခေါ်လို့ဖြစ်မလား။ ဘာသာရေး လွတ်လပ်မှုပေးမထားဘူးလို့ Human Right ပေတံနဲ့ တိုင်းတာ ခြင်းမျိုး သတ်မှတ်သင့်လား။ လက်ဦးဆရာ မည်ထိုက်စွာသား ပုဗ္ဗာစရိယ မိနှင့်ဖ တာဝန်လို့ရော သတ်မှတ်သင့်လား။ ဆုံးမပြုပြင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းလမ်းပြခြင်း နဲ့ အတင်းအဓမ္မ ပုံစံသွင်းထားခြင်း တို့ရဲ့ မြင်သာတဲ့ ကွာဟချက်တွေဟာ ဘာလဲ။ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ကာလမှာ ကိုယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို ကိုယ့်ရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် ကို လမ်းပြစည်းရုံးသင့် မသင့် ။ Brainwash လုပ်တယ်ဆိုတာ မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆဟောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပြီး မှန်ကန်တဲ့ (ဝါ) မှန်ကန်တယ်လို့ လက်ရှိယူဆနေတဲ့ အတွေးမြင်သစ်တွေ နဲ့ လဲလှယ်တာကို Brainwash လို့ခေါ်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဖြစ်စေချင်တဲ့ အယူအဆကို တစ်ဖက်လူ စဉ်းစားဥာဏ် မသုံးဖြစ်အောင် မှိုင်းတိုက်ပြီး ကိုယ်ဖြစ်စေချင်သလို ဖြစ်အောင် လုပ်တာကိုပဲ Brainwash လို့ သတ်မှတ်တာလား။
by Lu Cifer on Sunday, September 30, 2012 at 7:33am
ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း၊ အရှေ့၊ တောင်) မြို့နယ် ၃ ခုမှာ ရှိတဲ့ လယ်မြေတွေကို ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အကြောင်းပြပြီး ကုမ္ပဏီ(၁၅)ခုက သိမ်းယူထားတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ ကော်မတီတခုကို ပို့ထားတယ်လို့ ရှေ့နေကိုဖိုးဖြူက ပြောပါတယ်။
တက္ကသိုလ် အဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရေး
by Lu Cifer on Saturday, September 29, 2012 at 5:48am ·
တနေ့ကြရင် တက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်တွေဟာ မိမိတို့ဘာသာစီမံခန့်ခွဲပြီး အုပ်ချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က အစိုးရသက်တမ်း တနှစ်မြောက်မိန့်ခွန်းမှာ ပြောပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ မေလ (၁၂) ရက်နေ့ကတော့ ပြည်သူကို ဗဟိုပြုတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ အစိုးရရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြည်သူ့အကျိုးသယ်ပိုးရာမှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိဘဲ ဥပဒေစည်းမျဉ်းနဲ့သာ ထိန်းကျောင်းရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Author: lubo601 | 2:52 AM | No မှတ်ချက် |
ဘာသာပြန်အကျဉ်းချုပ် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို.အိပ်ဖွင်.ပေးစာ ) An open letter to Ms Suu Kyi (from No.1 to No.4)
ဘာသာပြန် (၁) Letter No.1
ယခင်တပတ်အတွင်းက၊ (an open letter to Ms Suu Kyi) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ အိတ်ဖွင်.စာ ၄ စောင် Between online news မှ တဆင်. ပေးပို.ေ၇းသားခဲ.၇ာ၊ မြန်မာလူငယ် အချို.က ဘာသာပြန်လေးလည်း ဖတ်လိုကြောင်း၊ တောင်းဆိုလာခဲ.ပါသဖြင်.၊ ယခုအခါ အောက်ပါအတိုင်း အတိုးချုံးေ၇းသားလိုက်၇ပါသည်။ ယခု ဘာသာပြန်သည် ပထမ အိပ်ဖွင်.စာကို ၇ည်ညွန်းပါသည်။
အများနည်းတူ၊ ကမ္ဘာအ၇ပ်၇ပ်လိုပင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံ၇ယူခဲ.သည်. Congressional Gold Medal ဆုအတွက် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Author: lubo601 | 2:10 AM | No မှတ်ချက် |
by Mya Than Tint on Friday, March 30, 2012 at 8:37am ·
ညို့မှောင်နေသည့်သူ့မျက်နှာပေါ်မှမျက်လုံးများသည်တဖျတ်ဖျတ်တောက်နေကြသည်။ ဆံပင်ဖရိုဖရဲ၊အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းနှင့်ခုံဖိနပ်ကိုစီးထားသည့် ထိုခပ်နွမ်းနွမ်းအဆင်အပြင်ထဲမှနေ၍ သူ့မျက်နှာသည် ကြည်လင်လတ်ဆတ်ကာ နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းနေသည်။
by Moenge Aung on Saturday, September 29, 2012 at 9:22pm
လူလတ်ပိုင်းဖြစ်သည့် ၅၀-ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူတို့သည် စိတ်ပြဿနာကို ခံစားရတတ်သည်။ ဘဝသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိဟု ထင်ခြင်းမျိုး၊ ဘဝကို ညည်းငွေ့ခြင်းမျိုး၊ ဘဝသည် လမ်းလွဲနေသည်ဟု ခံစားနေရခြင်းမျိုး ဖြစ်၏။ ကော်နယ်တက္ကသိုလ်၏ လေ့လာချက်အရ ၂၆%သော လူလတ်ပိုင်းတို့သည် ထိုကဲ့သို့ ခံစားရလေ့ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ကျန်းမာရေး ... ခေါင်းမူးစာတမ်း - Discussion withaBurmese Doctor
M. Zaw Aung uzawaung@gmail.com
မေး။ ။ဆရာခင်ဗျား၊ ခေါင်းမူးတဲ့ရောဂါကုခြင်းကို စိတ်ဝင်စား၊ ဆွေးနွေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လို ခေါင်းမူးတတ်သူများအတွက် ဆရာ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဝေငှပေးပါဦး။
ဖြေ (A Burmese Doctor)။ ။ ကျနော်ဆရာဝန်တဦးပါ။ ကျနော်လဲ ခေါင်းမူးရောဂါကို ၁၉၉၃- ၉၄- မှာ တော်တော်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အခုလဲ အစားမှားရင် မူးတာ ဘဲ ။ မူးရင် ၃၆-နာရီလောက်ကိုမူး အန်နေတော့တာပါ ။ နောက် ၉၄မှာတော့ အစားအသောက်ကြောင့်ဆိုတာ သိလာပြီး မူးတာကို ကုတတ်သွားပါတယ် ။ နောင်မူးခဲ့ရင် ကျနော့်ဆေးနည်းစမ်းကြည့်ဖို့သိလိုတယ်ဆိုရင် မျှဝေချင်ပါတယ် ။ ဗောဓီတစ်ထောင်ဆရာတော် လှည်းတန်းက ရန်ကင်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော်နစ် ကတော့ ကျနော်ကလွဲ ရင် တခြားဆရာဝန်ကုတာကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး ။
အခုချိန် တိုင်တန်းနစ်သင်္ဘောကြီး နစ်မြုပ်သွားရင်…..ဘာသံတွေကြားရမလဲ?
Author: lubo601 | 5:20 PM | 1 Comment |
နိုင်ငံအသီးသီးက တုန့်ပြန်ချက်တွေ၊ သဘောထားကြေညာချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာမှာ အမှန်ပါပဲ။
အမေရိကန်။ ။ “လွတ်လပ်စွာသွားလာနေတဲ့ တိုင်တန်းနစ်သင်္ဘောကြီးကို အကြမ်းဖက်သမားတွေ တိုက်ခိုက်တာခံလိုက်ရပါပြီ။ ကျုပ်တို့ ငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရတော့ဘူး။ ပါကစ္စတန်နယ်စပ်မှာပုန်းအောင်နေတဲ့ တာလီဘန်တွေနဲ့ အယ်ကိုင်ဒါတွေကို တုန့်ပြန်လက်စားချေရမယ်”
စွန့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာ ဘာကိုခေါ်ပါသလဲ (ကိုအမ်အမ်)
ကျွန်တော် ဒီကပြန်ရင် ရွာကိုခွင့်ပြန်မယ် ကျွန်တော့်အမေက မမာဘူးဗိုလ်ကြီးရဲ့ ညီမလေးကလည်း ကျောင်းပညာတပိုင်းတစနဲ့ အိမ်ပြန်ပီးကျွန်တော်စုထားတဲ့ လစာလေးနဲ့ အမေနဲ့ညီမလေးကိုထောက်ပံ့ခြင်တယ်
by Augustine Nge on Saturday, September 29, 2012 at 5:04am
(၂) ရေနွေးဖြင့် ပြုတ်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုသော တူ
မယ်မြ (အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား)
by Myanmar Literature on Saturday, September 29, 2012 at 8:15am ·
Kochan Tha facebook မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်...
လွန်ခဲ့သော ၁၃-နှစ်က သပိတ်မှောက်ကျောင်းများ ပေါ်ပေါက်လာရာ ရခိုင်ပြည် စစ်တွေမြို့တွင်လည်း အမျိုးသား ကျောင်း တစ်ကျောင်း တည်ထောင်လေသည်။ ထိုကျောင်းသို့ တနှစ်တခေါက်ဆိုသလို သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ လွန်ခဲ့သော လေး၊ငါးနှစ်လောက်က တစ်ခေါက် သွားရသည်။
by Khun Saing on Saturday, September 29, 2012 at 7:17am ·
သတင်းစာဆိုတာ မှန်မှန်မှားမှား သမိုင်းကိုပြောနေတတ်တယ်။ လူထုက အမှန်ကိုပဲကောက်တယ်။
နေုစဉ်က ကျွန်တော့် အတိတ်ကို ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါ လူကဲခတ် ညံ့တယ်လို့ တွေးမိတယ်။ နုစဉ်က လို့သုံးတာက အတွေ့အကြုံ နုံ နဲတာ ကိုပြောချင်တာ။ ထောင်စကျဖူးတဲ့ အချိန် အသက် ၂၃ ။
ကျော်ကွန့် နှင့် လှထုံ (ဇာတ်သိမ်း)
by မင်းလူ၏ ၀တ္တုတိုများ on Friday, September 28, 2012 at 6:59pm ·
ဒီလောက်နဲ့ပြီးလို့ ရရိုးလား။ မပြီးသေး။ ရှိသေးသည်။
တစ်နေ့ လှထုံ ဈေးသွားခါနီး ကျော်ကွန့်မှာသည်။
"ငါ့ဖိနပ် ပြတ်ခါနီးနေပြီကွ။ ဖိနပ်တစ်ရန်လောက် ၀ယ်ခဲ့စမ်းပါ" သူ့မိန်းမက မတော်မတည့်လုပ်လာမည်မှန်း သိသည်။
တော်လှန်ကော်မီတီ ကျေညာချက် ( ၁၉၉၀ )
by Htay Tint on Saturday, September 29, 2012 at 5:20am
တော်လှန်ကော်မီတီကျေညာချက်ကို အီးမေးထဲက ရရှိပါတယ် ။
တိုင်းပြည်ထဲက လူထူ အတွက် စေတနာမှန်တဲ့ စာတန်းဖြစ်ခဲ့လို့ 
အများသူငှာ သိရှိစေရန် မှတ်တမ်းအဖြစ်ထားရှိရန် ဖြန့် ဝေလိုက်ပါတယ် ။
by Lu Cifer on Saturday, September 29, 2012 at 9:17am ·
ကျောင်းသားဗဟိုပြုသင်ယူမှုစနစ်ကို (Student-centered Learning) ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။ သင်ကြားမှု သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်တွင် ကျောင်းသား၏ အတွေ့အကြုံကို ဗဟိုပြုသည့်သင်ယူမှုဟု ဆိုနိုင်သည်။ အပြောဖြင့် သင်ကြားနည်းမဟုတ်၊ အလုပ်ဖြင့် သင်ကြားသည့်စနစ်ဟူ၍လည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။
ကလေးဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်မှု (Child-centered Approach) ဖြင့် အော်ခဲ့ပြီး ဆရာ၏ ထိန်းကြောင်းညွှန်ပြ သွန်သင်မှုကို ခံခဲ့ကြရသော ပညာရေးကိုသာ အစဉ်အလာအနေဖြင့် လက်ခံကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်သည်။ ကျောင်းသား သို့မဟုတ် ကလေးကို ဗဟိုမပြုနိုင်သေးသည့် အကြောင်းတရားများစွာ ရှိပါသည်။
ကြွက်နှစ်ကောင် ပေါင်မုန့်တစ်လုံးနှင့် မြေခွေး
by ကျွန်တော်ဖတ်ချင်သော ပုံပြင်များ on Saturday, September 29, 2012 at 9:35am ·
တခါတုန်းက ဖြစ်သည်။ ကြွက်နှစ်ကောင် ပေါင်မုန့်တစ်လုံးရလာသည်။ သို့သော် ထိုပေါင်မုန့်ကို မည်သို့အညီအမျှ ခွဲရမည်ကို မသိဖြစ်နေသည်။ တစ်ကောင်ကောင် ပိုရသွားမည်ကိုလည်း နောက်တစ်ကောင်က မလိုလား။ ဒီလိုနဲ့ မခွဲဘဲ သယ်လာရင်း လမ်းမှာ မြေခွေးနဲ့တွေ့သည်။
မြေခွေး ။ ။ အော်... ညီလေးကြွက်တို့ပါလား ဘယ်က လှည့်လာတာတုန်းဗျ
ကြွက် (၁) ။ ။ ပေါင်မုန့်ကို ညီမျှအောင် ဘယ်လိုခွဲရမှန်းမသိလို့ပါဗျာ။
မြေခွေး ။ ။ ဟုတ်လား... ကျုပ်ကူညီပါမယ်ဗျ
by Lwin Aung Soe on Friday, September 28, 2012 at 10:25pm
ကျင့်သုံးနေဆဲ ပညာရေးစနစ်ကို ရုတ်တရက် ချက်ချင်းဆိုသလို ပြောင်းလဲပစ်တာမျိုးကို ကျနော်ကတော့ လုံးဝ ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
ရဲမြင့်သူရေးတဲ့ ကဗျာတွေအကြောင်း အခြားတစ်ထောင့်မှ ပြောကြည့်ခြင်း
by Lunnset Noemyat on Thursday, September 27, 2012 at 11:52pm ·
ရဲမြင့်သူဟာ လူသိထင်ရှား ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလမှာ အဲဒီ့ဒါရိုက်တာ ရေးတဲ့ ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ်ထွက်လာတယ်။ ကဗျာ ၁၆ ပုဒ်ပါပြီး စကားပြေကဗျာများလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတယ်။ ကဗျာစာအုပ်မှာ ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းမပါဘူး။ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်လိုမျိုး ၀ါဒဖြန့်စာသားတွေမပါဘူး။
လိင်စိတ် . . . အချစ်နဲ့ . . . ယားတဲ့အတွေးတွေ
Author: lubo601 | 3:39 PM | No မှတ်ချက် |
by Mar Ga Luelin on Friday, September 28, 2012 at 11:00am ·
....ကွမ်းသွေးတွေကို ဗြစ်ခနဲ ထွေးပြစ်လိုက်တယ်
by 7Day News Journal on Thursday, September 27, 2012 at 11:36pm ·
စစ်အစိုးရမှ အရပ်သားအစိုးရသို့ ကူးပြောင်းပြီးနောက် နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးအုပ်ချုပ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း အမျိုးသမီး ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုဝန်ကြီး ခြောက်ဦးတို့အား ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းက အမျိုးသမီးများ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း၏ ခြေလှမ်းသစ်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သူတို့က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအဖွဲ့တွင်း၌ ပထမဆုံးဖြစ်လာသည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးတစ်ဦး စက်တင်ဘာ (၇)ရက်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးများ ကတိသစ္စာပြုသည့် အ ခမ်းအနားမှစ၍ တွေ့မြင်ခဲ့ရကာ ထိုမတိုင်မီကလည်း ပြည်ထောင် စု၏ ဒုတိယဆင့် အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ် သော ဒုတိယ၀န်ကြီးအဆင့်တွင် အမျိုးသမီးဦးရေ ငါးဦးထိ ပါဝင် လာခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ ပြောင်းလဲမှုအရှိန်ကောင်းနေသည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသမီးများကို ပြည်ထောင်စု အဆင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ခြင်း အား အတတ်ပညာရှင်ပိုင်း၊ နိုင်ငံရေးပိုင်းများမှ ကျွမ်းကျင်သူများက အပြုသဘော ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
by စာကြည့်တိုက်(ရွှေအိမ်စည်စာပေဒါနပြုပါသည်) on Friday, September 28, 2012 at 1:36am ·
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်း ကချင် လူမျိုးတို့ နေထိုင်ရာ အချက်အခြာဒေသမှာ ချင်းတွင်းမြစ်ဖျားနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဖျားတို့ ဖြတ်သန်း စီးဆင်းရာ ဒေသတ၀ိုက် ဖြစ်သည်။ မြောက်လတ္တီကျု ၂၃ံ၃၇' နှင့် ၂၈ံ၂၅' အကြား ၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျု ၉၆ံနှင့် ၉၈ံ၄၇' ကြားဖြစ်သော အာသံပြည် အရှေ့မြောက်ပိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း တရုတ် - မြန်မာ နယ်စပ်အလွန် ဒေသများတွင် ပျံ့နှံ နေထိုင်ကြသည်။
by Mgchaint Wynn on Thursday, September 27, 2012 at 8:35pm
ပုဇွန်တောင် လူသတ်မှု ဖြစ်ရပ်မှန် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုက...
ဘာသာပြန်အကျဉ်းချုပ် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို.အိပ်ဖွ...
ကျန်းမာရေး ... ခေါင်းမူးစာတမ်း - Discussion with a...
အခုချိန် တိုင်တန်းနစ်သင်္ဘောကြီး နစ်မြုပ်သွားရင်…..ဘ...
ရဲမြင့်သူရေးတဲ့ ကဗျာတွေအကြောင်း အခြားတစ်ထောင့်မှေ...
စိတ်အေးချမ်းသာနည်း ( ၁၀ ) ဖြာ
***သံဖြူဇရပ် *** သေမင်းတမန်ရထားလမ်း***သိကောင်းစရာ*...
လာမည့်ပညာသင်နှစ်တွင် အလယ်တန်းအဆင့်ထိ အင်္ဂလိပ်စကာြးေ...
မဟာဗျူဟာအရွှေ့အပြောင်းမှာ ဘယ်လိုနည်းဗျူဟာတွေ လိုမလဲ
မိဘဂုဏ် - (၁၂ ) ပါး
သင်းကွဲငှက်ငယ်များ၏ အဆိပ်သင့် ဒဏ္ဍာရီ ......
အရိုးအဆစ်နာ ရောဂါ၊ လေးဖက်နာ ရှိသူများအတွက် ခံနိုင်...
My Leader ( DASSK )
Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water - M...
ကျွန်မ စိုက်သည့် ပျိုးပင်များ ....
အက်ဆစ် ဒိုင်ယာရီ - ၁
တိုင်းကြီး ပြည်ကြီးသား (မြင့်သန်း)
“ကိုကရင်နှင့် သူ၏ ကျောင်းကလေး” (စိမ်းခက်စိုး)
တစ်စုံတစ်ခုအပေါ် သံသတွေထားတာ များပြားနေတယ် အဲ့ဒါဟာ ...